musha United Kingdom vatambi Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeChirungu Anonzi Comedian anozivikanwa zvikuru nezita rokuti "Mr Bean ". Yedu Rowan Atkinson Childhood Nhau pamwe nes Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika pane. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvezvaanoita manzwiro emukanwa anonakidza mumakwikwi ake. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoona Rowan Atkinson's biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino, pasina humwezve, ngatitangei.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Rowan Sebastian Atkinson akaberekwa musi we 6th waJanuary 1955 paButttt muChurham County, United Kingdom. Akanga ari mwana wokupedzisira akaberekwa naamai vake Ella uye kuna baba vake Eric (mupfu akafuma)., Nezvemidzi yake, Atkinson ndeyemamerica neArmenian mavambo aya ekupedzisira ari pachena muchimiro chake cheArmenian uye chiso chake.
Muduku Atkinson akakurira pamwe nehanzvadzi dzake dzakakura Rodney naRupert kuDurham uko iye anozivikanwa kuti ave akapedza hudiki hwake hwose. Mukomana muduku uyo ​​akazununguka achiri muduku akadzidziswa kutora hupenyu huri nyore nevabereki vake vapfumi sezvavakamupa ropafadzo dzakasiyana kune nhengo yekupedzisira yemhuri yese.
Yakanga iri nyaya yenguva isati yasvika mukomana wechidiki pamusoro pekutaura kwake zvinetso kuti ave iye nhasi.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Atkinson akanyoresa pazvikoro zviviri zvekubhadhara zvaive zvichishandiswa pasi pezvinyorwa zveChechi yeEngland. Chokutanga chaiva Durham Choristers, chikoro chekugadzirira icho chinozivikanwa nekuedza kuita vapristi kunze kwevadzidzi. Paaiva pachikoro, Atkinson aizivikanwa semwana anonyara ane stutter zvishoma uye chiso chinonzi rubbery. Zvinofadza kuti aivewowo mukirasi wepakutanga weBritain, Prime Minister, Tony Blair pachikoro.
Kufambira mberi, Atkinson akanyoresa St. Bees School apo tarenda yake yemutambo yakarongedzerwa naiye wake wechipiri A-level physics master, Chris Robson. Maererano naChris;
"Mukirasi akanga ari pakati pemugwagwa. Pakanga pasina chinhu chakakosha pamusoro pake. Ndakanga ndisingatarisiri kuti ave scientist anofadza. Uye akanga ari mukomana akanyarara akafamba munzira yake. Asi paaifamba-pamba akave akasiyana ".
Nokudaro yakatanga "rwendo rworwendo" rwevadzidzi vekusekondari avo pavakapedza kudzidza, vakashandura mu Electrical Engineering kuYunivhesiti yeNewcastle vasati vaenderera kune Queen's College, Oxford mu1975.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Yaiva pamadzimai Queen's College, Oxford kuti Atkinson akaonana nemunyori wechenyu, Richard Curtis. Kushanda pamwe chete, vakauraya mifananidzo ye Oxford Playhouse uye Mutambo weEdinburgh Fringe mugore rakatevera (1976). Mutambi uyu mukugadzira waivawo nhengo inoshingaira yemasangano akasiyana-siyana uye sangano rinoshamisa, chiitiko chakaita kuti mavara ake emufananidzo ave nekuzivikanwa kukuru pakati pevadzidzi nevadzidzisi.
3 makore akazotevera mu1979, Atkinson akakurudzira basa rake nekutsvaga mumutsara wemakwikwi anoratidza BBC Radio 3 ichinzi 'The Atkinson People' uyewo terevhizheni yemapikicha yemifananidzo yakanzi, 'Kwete Nei O' Clock News. Kubudirira kwake mumutambo wekuterevhizheni kwakamupa iye mafirimu ake ekutanga mufirimu yemufananidzo, The Black Adder iyo yakaita kuti ave mumwe wevatambi vemakwikwi anozivikanwa muEngland.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Achitevera purogiramu yake yakabudirira muThe Black Adder, Atkinson akabatanidza pakuzivikanwa kwaaigara mune zvemafirimu 'The Appointments yaDennis Jennings' uye 'The Tall Guy' yose pakati pe1987-1989.
Kubudirira kwake pakupedzisira kwakauya mu1990 apo akakandirwa seanoshungurudza, buffoon, Mr Bean muchiratidziro chakanzi, 'Mr. Bean '.
Iko kuratidzwa kwaive kwakakurumbira muumambo hwakabatanidzwa uye kune dzimwe nyika kuti yakatungamirira kune dzimwe nzvimbo dzakawanda dzeTV uye imwe firimu refirimu rainzi Bean rakatanga mu 1997. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Atkinson ave akaroorwa kamwechete. Tinokutaurira tsanangudzo pamusoro pehukama hwake hwekuroorana pamwe chete nehukama hwake huripo. Mutambi weChirungu akasangana nomukadzi wake wekare uye Beauty Make-up muchengeti Sunetra Sastry paanenge achishanda pachidimbu cheThe Tv show "Black Adder" mu1986. Vakatora makore anopfuura 3 vasati varoora muna February 1990.
Ukama hwavo hwakakomborerwa nevana vaviri mwanasikana Lily Grace (mutambikadzi) uye mwanakomana Benjamin Alexander Sebastian (basa reMeshi yevarwi).
Iko zvino vakaroorana vakaroorana vachifara pashure pacho kusvikira vakaparadzana mu2014 mushure mekunge zvataurwa kuti Atkinson aiva nemudzimai mutsva muupenyu hwake. Gore rakatevera, vakasaina mapepa akarambana ne Sunetra vachicherechedza kuti kupatsanurwa kwaibva paAtkinson "unhu husina musoro".
Nezvehukama hwake hwemazuva ano, Atkinson akatanga kupambidzana nemusikana musikana Louise Ford mu 2014, mwedzi 18 vasati varoora neSetetra.
Louise muchengeti wechechi uyo akasangana naAtkinson pavakabuda muchitambo "Quartermaine's Terms" mu2013. Kufambira mberi kune zuva iro vaviri vakaroorana vasati varoora asi vane mwana akazvarwa masvondo mushure mokunge Louise akanganisa mwana wake muchechi munaNovember 2017.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Atkinson akaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvebaba vaAtkinson: Eric ndiye baba kuna Mr Bean nyota. Akanga ari mufimi mufumi uyo anotenda kuti akarwisana muHondo Yenyika II. Iye anozivikanwawo kuva muInjiniya yeMagetsi, chiitiko chakakonzera Atkinson chisarudzo chekudzidza.
Nevana vaAtkinson: Ella ndiye amai vemutambi wechiChirungu. Akanga ari mukadzi wemudzimai akaumba ukama hwepedyo nevanakomana vake uye akakurudzira zvavanoda.
Nevanin'ina vake: Atkinson ane vakoma vatatu vatatu. Vanosanganisira Pauro, uyo akafira sechecheche, Rodney - muEurosceptic economist uyo akatanga kuona kukosha kwaAtkinson yemutambo uye Rupert avo vashoma vanozivikanwa pamusoro.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Rufu Hoax
Atkinson ave katatu akaparidzirwa afa nemashoko asina kunaka ari kuenderera mberi paIndaneti. chiitiko chekutanga chekufa kwake chakanga chiri muna July 2016 apo fake 'BBC' kuparadzanisa nhau yakaratidza kuti munyori wechiratidzo akafa pazera re58 mushure mekuzviuraya.
Saizvozvowo, imwe nhoroondo yezvakaipa yakatanga kupararira muna March 2017 ine zvishoma zvishoma kana ichienzaniswa nezvakaparadzirwa mu2016. Yakanga isiri iyo kusvika 2018 kuti hoax yakatora humwe hutsva nehuwandu hwevhidhiyo dzakasangana nemavhidhiyo, inokoka nhengo dzisingafungi dzevanhu kuti varove bhodhi yemutambo iyo inonyatsopinza makombiyuta avo ne ransomware.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Air Hero
Pane imwe nguva munaChitatu 2001, Atkinson akadzivisa chinogona kunge chaiva dambudziko guru nekutora kutungamirirwa kwebhururu yega pachake mushure mokunge mutyairi wake afa. Mutambi wacho akanga ari panguva yaifamba nemudzimai wake nevana muKenya pose paakaona kuti mutyairi wacho akanga avhara maziso ake uye akadzokera shure pachigaro chake.
yakanga isati yava nguva refu Atkinson akamanikidzwa kutora simba paainge akatora mapatya-prop Cessna akatanga kurasa kure. Nenzira yakanaka, mutyairidzi akadzorerwazve akawanazve kuziva munguva yekusiya Atkinson wemukurumbira wake we15. Kusvikira ipapo Atkinson ndiye gamba rakaponesa zuva racho.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Rudo Kune Cars
Asi kunze kwebasa rake, Atkinson anoda motokari uye ane zvakawanda zvekuunganidza.
Mukuwedzera pakuva nemotokari inoshamisa, Mr Bean anoshandisa chido chake chemotokari nekunyora magazini akawanda emotokari uye kuonekwa pamitambo yakakurumbira yeterevhizheni se 'Full Throttle' uye 'Top Gear'. Anotsigirawo mazwi nekuita nekukwira motokari dzinosanganisira Renault 5 GT Turbo, Aston Martin pakati pevamwe.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Atkinson ndiye anonyanya kuongorora Professional actor uyo ari pa-skrini huri chinhu chiri pedyo nehukama hwake hwehupenyu. Maererano naye:
"Vanhu vanofunga nokuti ini ndinogona kuita kuti vaseke panhandare, ini ndichakwanisa kuvaseka mumunhu. Izvozvo hazvisizvo zvachose. Ini ndiri chaizvoizvo munhu akanyarara, munhu akaremara uyo anongoerekana aitika kuva mutambi. "
Ichokwadi maererano nemashoko ake, Atkinson haana mabhuku ehupenyu hwehupfumi kana kune mamwe mapeji evhidhiyo pa Instagram ne Twitter. Pamusoro pezvakanaka, Atkinson ndiye Mutarisiri uye mutariri akanaka anoziva nguva yekusiya sezvinoratidzwa mukurega kwake kubva kune anobatsira Mr Bean unhu.
"Kunze kwekuti simba rako rekunyama rinotanga kupera, ndinofungawo kuti mumwe munhu ari mumakore makumi mashanu ari kufanana nevana anobva ashungurudzika. Iwe unofanira kungwarira. "
Pane flip side, mutambi wacho aigona nyore kurasikirwa nechinangwa nekusavhiringidza zvose zvaaimbova nechido mukati. Kunyange zvakadaro, anoda mhuri, tsika, mimhanzi, uye unyanzvi hwakanaka.
Rowan Atkinson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwakakurumidza Chokwadi
Atkinson anotarisira kudengenyeka kwake nemashoko akawanda, nzira yekukunda mavhiringidzi ane dambudziko, nokuti "B" inonzwika.
Akambomudzinga McLaren F1 kaviri uye akadana £ 910,000 inshuwarheni pakugadzirisa kwayo, yakakwirira yakambokanyorwa muBritain.
Kubva pamabhadharo evhidhiyo Atkinson akatumira izwi rake kuna Zazu muSimba King.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Rowan Atkinson Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!